Ny beta ho an'ny besinimaro amin'ny iOS 16 dia mety ho tara noho ny olana momba ny fahamarinan-toerana | iPhone News
Angel Gonzalez | 18/05/2022 12:00 | iOS 16, About us
La WWDC Eo an-joron-trano dia ho eo amin'ny fehin-kevitry ny fanokafana ny fotoana hanehoan'i Tim Cook sy ny ekipany ny rafitra fiasa vaovao. Anisan'izany ny iOS 16 sy iPadOS 16, izay toa tsy ho tonga amin'ny fanovana endrika lehibe, fa miaraka amin'ireo endri-javatra vaovao manatsara ny fifandraisan'ny rafitra amin'ny mpampiasa. Na izany aza, misy zavatra mitranga ao Cupertino. Ny vaovao farany dia manondro ny Olana momba ny fahamarinan-toerana ao amin'ny iOS 16 betas. Mety hiteraka izany fanemorana ny famoahana ny beta ho an'ny daholobe Mety ho tara herinandro vitsivitsy izany.
Ny olana momba ny fahamarinan-toerana dia mety hanemotra ny fandefasana ny beta ho an'ny besinimaro voalohany amin'ny iOS 16
Ny fitaovan'ny betas an'ny rafitra fiasan'ny Apple dia mihoatra noho ny menaka. Nandritra ny taona maro, Apple dia mamoaka ny beta voalohany ho an'ny mpamorona amin'ny faran'ny fanokafana ny WWDC. Amin'izany fotoana izany, ireo mpampiasa manana famandrihana amin'ny Apple Developer Program ihany no afaka mametraka ireo beta ireo amin'ny fitaovany. Herinandro taty aoriana, miaraka amin'ny fandefasana ny beta faharoa ho an'ny mpamorona, Apple dia manokatra ny Public Beta Program, manomboka ny dikan-teny voalohany. Ity programa ity dia azon'ny mpampiasa rehetra manana fitaovana mifanentana.
Na izany aza, miaraka amin'ny iOS 16 dia toa hiova ny daty. Ny vaovao farany avy amin'ny gurman manondro inona Ny iOS 16 dia tsy milamina araka ny irin'ny Apple. Ny fananganana farany amin'ny beta voalohany ho an'ny mpamorona dia tsy miorina tanteraka ary izany dia midika izany ny public betas dia hanemotra ny famoahana azy. Izany dia satria Apple dia tsy te hampidi-doza amin'ny famoahana dikan-teny goavana amin'ny endrika beta ho an'ny daholobe satria midika izany fa manaparitaka rafitra fiasa ambany kalitao noho ny faniriana.
Ny beta ho an'ny besinimaro voalohany an'ny iOS 16 dia nokasaina miaraka amin'ny iOS 16 developer beta 3 tamin'ny Jolay. Ny beta ho an'ny besinimaro voalohany amin'ny iOS dia matetika navoaka miaraka amin'ny beta 2. Midika izany fa ny beta ho an'ny daholobe dia mety mihazakazaka ao aoriana. Somary manjavozavo ny voa anatiny ankehitriny. Mbola mivaingana ny zavatra ary mety hiova.
- Mark Gurman (@markgurman) Enga anie 16, 2022
Ny daty fanondro dia mametraka ny beta voalohany ho an'ny mpamorona amin'ny 6 Jona, ny faharoa tapa-bolana taty aoriana ary ny fahatelo amin'ny Jolay. Ao anatin'ity beta fahatelo ity ho an'ny mpamorona ny fotoana nanapahan'i Apple ny famoahana ny dikan-teny voalohany ho an'ny Programa Beta Public. Ny mahasamihafa azy dia amin'ny fotoana hafa Apple dia manokatra ny programa beta ho an'ny daholobe amin'ny beta faharoa ho an'ny mpamorona.
Ho hitantsika raha toa ireo avy any Cupertino amin'ny farany dia afaka mahazo dikan-teny stable hamerenana ny kalandrie mahazatra na raha toa ka, mifanohitra amin'izany, dia manana vaovao momba ny iOS 16 betas.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 16 » Ny iOS 16 beta ho an'ny daholobe dia mety ho tara noho ny olana momba ny fahamarinan-toerana